I-Apartment Neumauracher, Neumauracher Straße 65 - I-Airbnb
I-Apartment Neumauracher, Neumauracher Straße 65
Maurach, Tirol, i-Austria
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Tanya
U-Tanya Ungumbungazi ovelele
Ifulethi elisha elakhiwe elingu-33m2 elinokubukwa kwechibi kanye nokufinyelela kalula edolobhaneni, echibini, ezindaweni zokushushuluza eqhweni, imizila yokushushuluza enqamula izwe kanye nezindlela zokuhamba izintaba. Igumbi lokuhlela elivulekile elinombhede wenkosi, i-TV, i-WIFI, usofa, itafula lokudlela, ikhishi eligcwele uhhavini, ipuleti elishisayo, umshini wokuwasha izitsha nomshini wekhofi, igumbi lokugezela elibanzi elineshawa kanye nethala elinefenisha yangaphandle.
Izinsiza zokwenza itiye nekhofi ziyatholakala kanye nempahla yokupheka nezinto ezibalulekile.
5.0 · 166 okushiwo abanye
Esigodini saseMaurach kunezitolo ezinkulu ezimbili, indawo yokubhaka, amabhange amabili, abacwali bezinwele, isitolo sobucwebe, isitolo sezicathulo, izitolo zezemidlalo kanye nenani lezitolo zezingubo. Konke kungafinyelelwa ngemizuzu eyi-10 ngezinyawo. Kunezindawo zokudlela eziningi nezitolo zekhofi. I-Atoll iyisikhungo esisanda kwakhiwa sokubhukuda, ezokungcebeleka, sokuphila kahle singafinyelelwa ngemizuzu eyi-10 ngezinyawo eduze kwechibi. Ukubhukuda, ukuntweza nge-kite, ukuntweza emoyeni, ukuhamba ngomkhumbi konke kungenziwa echibini elihle i-Achensee. Indawo futhi ilungele ukugibela ibhayisikili lezintaba, ukugibela amatshe nokuhamba ngezinyawo. Kunezindawo ezintathu zokushushuluza ekwehleni eduze, eyodwa engafinyelelwa ngezinyawo. Izindawo ezimbili zegalofu ziseduze namadolobhana asePertissau nase-Achenkirch.
Sizotholakala ezikhathini eziningi futhi sithinteke ngomakhalekhukhwini nange-imeyili. Ibhokisi lokukhiya lingaphandle kwefulethi ukuze uzihlolele lona. Ikhodi 0205. Ngena ngezikhathi kusukela ngo-2pm nangesikhathi sokuphuma ngo-10am.
UTanya Ungumbungazi ovelele